Indlu engenabugocigoci - I-Airbnb
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguLin
Indlu entsha, ekhanyayo nekhanyayo nenendawo enkulu yokuhlala kwindawo entle. Umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu kunye nezinto onokuzisebenzisa ezikhoyo. Ihlala kakuhle, imizuzu eyi-5 ukuya kumalwandle amahle aseAdelaide. Kufuphi neFlinders University kunye neZiko Lezonyango. Umgama wokuhamba ukuya kwi-Marion Shopping Centre enkulu, i-SA Aquatic Centre, kunye ne-Goodlife Gym. Indawo yezithuthi zikawonke-wonke ekufutshane.
Igumbi: Igumbi elitsha elinekhaphethi, elinezinto zale mihla neziqaqambileyo. Iwardrobe eyakhiwe ngaphakathi. Ishelfu yeencwadi kunye netafile esecaleni kwebhedi.
Iindawo ezisetyenziswa nangabanye abantu: indawo evulekileyo yokuhlala/yokutyela/ikhitshi negumbi lokuhlambela. Zonke ezinkulu, zicocekile, zanamhlanje, ziboniswe kakuhle kwaye zihonjiswe kakuhle.
Le yidolophu ethandwayo enepaki kunye nebala lokudlala elikufutshane. Ikufutshane neziko eliphambili lokuthenga elisezantsi, iWestfield Marion, uhamba nje imizuzu eyi-5 ukuya kweyi-10. Ikwafumaneka lula kunxweme olusemazantsi oludumileyo lwaseBrighton, ikumgama wemizuzu eyi-5 kuphela xa uhamba ngemoto.
I'm an easy going full time nurse. I enjoy exercise and communicate with people.
Ndiyakuvuyela ukuncokola okanye ukukunika izinto zakho eziyimfihlo ukuze uphumle uze uphumle. Xa ukubhukisha kwakho kuqinisekisiwe, wamkelekile ukuba uqhagamshelane nam nanini na ngefowuni okanye nge-app ye-AirBnB.